३२ औं संस्करणको झरना रनिङशिल्ड सुरु -::DainikPatra
बुटवल। रूपन्देहीको कुन्जलापुरमा शुक्रबारबाट ३२ आंै झरना रनिङ शिल्ड नकआउट फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । उमानिमाविको खेल मैदानमा संचालन भएको प्रतियोगिता असोज २७ गतेसम्म चल्ने छ भने प्रतियोगितामा १६ टिमको सहभागिता रहेको छ ।
प्रतियोगिताको एक कार्यक्रमका बीचमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेब घिमिरेले उद्घाटन गरे । २०३९ सालमा स्थापना भएको क्लबले प्रत्येक बर्ष पुरस्कार राशीलाई पनि बढाउँदै लगेको छ । ३२ आंै संस्करणको बिजेताले नगद ३ लाख तथा उपबिजेताले १ लाख ५० हजार प्राप्त गर्ने क्लबका कोषाध्यक्ष धनेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै सेमिफाइनलिस्ट दुई टिमलाई नगद २१ हजार तथा विधागत रूपमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीहरूलाई पनि नगदसहित सम्मान गरिनेछ । प्रतियोगितामा सुपौली एफ.सी. सुपौली, आर के.एफ.सी. बुटवल, लिस्नु युवा क्लब कोटिहवा,भूपू सैनिक जबई, युनाइटेड कपिलवस्तु, पश्चिम क्षेत्रीय तालिम केन्द्र बुटवल, शौभाग्य युवा क्लब बुटवल आयोजक झरनाको सहभागिता रहेको छ । यस्तै जनज्योति युवा क्लब, इन्टर स्पोर्टस क्लब कुन्जलापुर, गोर्खा ब्याइज बुटवल, फर्साटिकर युवा क्लब फर्साटिकर, नवयुवा खेलकुद तथा सांस्कृतिक परिवार ठुटिपिपल, योङस्टार मडाहा, फूलबारी गाइज बुटवल, र न्यू भैरव एफसी नवलपरासी रहेका छन् ।
उद्घाटन खेलमा आरकेएफसीको जित
प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आर.के.एफ.सी. बुटवलले सुपौलीलाई ४ –१ ले पराजित गर्दै पहिलो खेलमा जित दर्ता गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सुरुवाती अग्रता भने सुपौली एफ.सी.ले लिएको थियो । सुपौलीका लागि खेलको पहिलो हाफको ३८ आंै मिनेटमा अमर पुनले आर्कषक गोल गरे । १ गोलले अग्रता बनाएको सुपौलीले अग्रता लामो समयसम्म जोगाउन भने सकेन । खेलको ४० आंै मिनेटमा आर.के.एफ.सी बुटवलको तर्फबाट अबेश शाहीले गोल गरे । खेलको दोस्रो हाफको ५९ औं मिनेटमा बिनोद थापाले झण्डै २५ यार्ड टाढाबाट हानेको प्रहारले सिधै जाली चुम्दा आर.के.एफ.सी.ले अग्रता दोब्बर बनाएको थियो । त्यसलगत्तै खेलको अन्त्यतिर अबेश शाहि र बिनय केसीले गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे । खेलमा आर.के.एफ.सी.को तर्फबाट अबेश शाही म्यान अफ दी म्याच घोषित भए । प्रतियोगिताअन्र्तरगत शनिबार लिस्नु युवा क्लब कोटिहवा भर्सेज भूपू सैनिक जवइ स्पोर्टिङ क्लबका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने क्लबका अध्यक्ष लोक पुनले जानकारी दिए ।